6 yemahara Dropbox dzimwe nzira dzeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Dropbox Yaive yekutanga uye inozivikanwa mukurumbira gore rekuchengetedza mapuratifomu. Vazhinji vashandisi vanoshandisa iyi sevhisi sevhisi kuti vakwanise kuve nemagwaro anowanikwa chero kupi kana kugadzira makopi ekuchengetedza pasina kufanira kutsamira panyama midhiya inogona kukuvara, senge maCD, maDVD, nezvimwe. Ngazvive sezvazvingave, masevhisi ekuchengetedza akakura muhuwandu uye kukosha, uye kwatova nezvimwe zvakawanda zvekusiya.
Pane dzimwe nguva isu tataurawo nezveyeduCloud, yemahara uye inonakidza chirongwa chekushandisa gore redu pachedu, asi mune ino nyaya isu tichangozvimisikidza pakuratidza dzimwe nzira nhanhatu dzakanaka kuDropbox, vamwe vane vatengi veGNU / Linux masisitimu anoshanda uye akasununguka zvachose, pasina kuenda mukugadzira yedu yega gore. Kunyangwe ichi chiri chinhu chega, nekuda kwezvinodiwa, kuravira kana nyaya dzekuchengetedza, sarudzo yedu ndeiyi:
MEGA: ndiye anotsiva Megaupload. Shasha yechiGerman K. Dotcom aiziva kugadzira sevhisi iyo yaizounza gakava guru uye zvaizoita kuti FBI ivhare pasi nekumupa mhosva. Asi akashongedzerwa nemagweta uye mushure mekubhadhara mari yake yechibatiso, mubiridzi akagadzira zvakare MEGA, zvisinei akaibvisa uye zvino yava yeChina. Nekudaro, isu tinofanirwa kuve takasvinura, nekuti munguva pfupi iri kuuya chirongwa chitsva cheDotcom chinovavarira kuve chakatonaka. Kunyangwe paine chokwadi chekuti MEGA inoita senge kwandiri ndeimwe yeakanakisa emahara masevhisi kunze uko izvozvi… Kunyanya kune yayo 50GB mune yemahara vhezheni !!!
SpiderOak: MEGA zvakare yakachengeteka, sezvo iine encryption system, uye kana iwe uchida kuve nechengetedzo, ino sevhisi nyowani zvakare inokupa iwe kunyorera pane yako yekuchengetedza. Kuenzaniswa neDropbox, inopa 2GB mune yayo yemahara vhezheni uye 100GB mune yakabhadharwa Pro.
Toni: ibasa rekuchengetedza mukati megore nekuwana kwakachengeteka uye iyo inobvumidza kugovana zvinongedzo zvakare senge MEGA.
pCloud: inowanikwawo iyo app yedesktop mune makumi matatu neshanu nematatu masisitimu senge yapfuura. Icho chimwe chiitiko chine 32GB yevashandisi vasingabhadhari uye nekwaniso yekuwedzera kuburikidza nekubhadhara.
CloudMe: zvimwe zvakafanana, mune ino ine 19GB yevashandisi vemahara, nepo pa € ​​1 pamwedzi iwe unogona kuwedzera 10GB zvimwe kana 25 pa4 euros uye usvike 500GB kana ukabhadhara € 30 pamwedzi.
Team Drive: encryption, ibasa nemutengi kuwiriranisa Linux, iine hunhu hwakafanana kune vekare.
MhedzisoKurudziro yangu ndeyekuti iwe ushandise MEGA kana Google Drive kana iwe usina zvakawanda zvinodiwa, mirira iyo nyowani Dotcom sevhisi (kunyangwe yakatononoka panguva dzinoverengeka ...). Icho chikonzero chiri nyore, kunze kwekubatsira kwayo uye zvakanakira, iro rinozivikanwa sevhisi, zvishoma mukana waro ichavharwa sezvakaitika nevamwe ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » 6 yemahara Dropbox dzimwe nzira dzeLinux
"Kunyanya kuzivikanwa sevhisi, kushoma kunovharwa sezvazvakaitika nevamwe ..."
Saka iwe unoreva kuti megaupload yakaivhara nekuti hapana aiziva nezvayo?
Zvinotaridza kuti CloudMe ine 3 GB mune yayo yemahara chirongwa, kwete 19
Luis Avila akadaro
Sevhisi yemahara inotanga ne25 GB inokwidziridzwa kusvika makumi mashanu ndiHubic https://hubic.com/es/
Yandex.Disk inopa 10GB uye 32GB zvimwe kana iwe ukapinda kubva kune yayo app.
Yandex.Disk inopa 10GB nekukasira uye 32GB yakawanda kana iwe ukaisa yayo app.
Michael Silva akadaro
Uye hazvingave zvakachengeteka uye zvakanyanya wega kuva negore rako pachako kumba? Ini ndinoti nedhiziri rekunze rehukuru hwaunoda uye nekumisikidza iyo ma routers mazhinji atounza kubva kufekitori, pane mumwe munhu akambozviedza, pasina kuvaka server yakatsaurirwa?
Pindura Miguel Silva